Ciidamada Danab oo howlgal ka fuliyey Sh/Hoose (Nin la dilay oo Meydkiisana la qaatay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ciidamada Danab oo howlgal ka fuliyey Sh/Hoose (Nin la dilay oo Meydkiisana la qaatay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada Danab oo howlgal ka fuliyey Sh/Hoose (Nin la dilay oo Meydkiisana la qaatay)
Ciidamada Danab ee xoogga dalka ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanno ka tirsan Gobolka shabeellaha hoose, halkaasi oo la sheegay inay ku burburiyeen fariisimo Al-Shabaab ku lahaayeen.
Goolaha howlgallada ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahaa Gambaarey, Dawacaale iyo Geediyaan oo ka tirsan gobolka Sh/hoose. Sida lagu sheegay war kasoo baxay taliska Milatariga ciidamada xoogga dalka ayaa baacsaday maleeshiyo ka tirsanaa argagixisada oo Bulshada halkaas ku nool dhibaato ba’an ku hayay.
Dhinaca kale dadka degaanka ayaa sheegay in ciidamada Danab ay qof shacab ah habeen hore ku dilay gurigiisa degmada Wanlaweyn, markii ay usoo dhaceen habeen barkii, yagoo ninkaasi ku dhex dilay Gurigiisa.
Ninka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Cumarow. markii la dilay ninkan ayaa la sheegay in meydkiisa ay hore u qaateen ciidamada Danab oo ay geeyeen saldhigga Balidoogle.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay taliska Milateriga, kun saabsan howlgalka lagu dilay ninkan iyo eedaha loo heystay midna, waxaana hore falalkan oo kale uga dhaceen degaanada Wanlaweyn.
Previous articleAbiy Ahmed oo dib ugu laabtay Furrimaha Dagaalka iyo Jid muhiim ah oo laga qabsaday…
Next articleXOG: Fahad Yaasiin Howlgab ka dhigay Wasiirkii Amniga, dibna ula wareegay Hay’adda Sirdoonka